लकडाउन र निषेधाज्ञाबाहेक केही सोच्नै सकेन सरकारले
यम बम काठमाडौं - शुक्रबार, भदौ ५, २०७७
जसरी गत वर्ष चैत ११ गते हठात ‘लकडाउन’ जारी गरियो, त्यसैगरी चार महिनापछि साउन ७ मा एकाएक लकडाउन अन्त्य भयो।
मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या दोहोरो अंकमा रहेका बेला लकडाउन गरिए पनि अन्त्य गर्दा संकट टरेको होइन, झन बढेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमको भनाइमा ३५ दिनअघि संक्रमण दर आठदेखि नौ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। साउन ६ मा आइपुग्दा संक्रमित संख्या १८ हजार पुग्न ६ बाँकी थियो।
मुलुक बाहिरबाट आएका व्यक्तिमा मात्र संक्रमण देखापरेका बेला निश्चित क्षेत्रलाई मात्र लकडाउन गरेर काबुमा ल्याउन सक्ने स्थितिलाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले देश नै ठप्प पार्‍याे‌। मुलुक ९० दिन पूर्णलकडाउनमा रहेकामा सुरुका २१ दिन त आर्थिक क्रियाकलाप पूर्णरूपमा ठप्प बने।
असंगठित क्षेत्रका मजदुर भोकभोकै भएपछि सयौं किलोमिटर पैदल हिँडे, बेतनभोगीहरूलाई पनि छाक टार्न हम्मेहम्मे भयो। उद्यम, व्यवसाय ठप्प रहे।
त्यो यस्तो समय थियो, वार्षिक राजस्वको ५० प्रतिशतहाराहारीमा संकलन हुने, विकास खर्च ह्वात्तै बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्थ्यो।
‘त्यतिखेर सीमा नाकामा कडाइ गरेर परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपर्दथ्यो, तर हामीले न राम्रोसँग कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सक्यौं न परीक्षण नै,’ जनस्वास्थ्यविद डा. शरद वन्त भन्छन्, ‘बाहिरबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न नसक्नु, क्वारेन्टाइनमा रहेकालाई परीक्षणबिनै घर पठाउनु त्रुटि रह्यो।’
लकडाउन अन्त्य गरेको एक महिना नपुग्दै मुलुक यस्तो जटिल मोडमा आइपुग्यो– कोरोनाको चेन तोड्न नसक्दा संक्रमण दरमात्र होइन मृत्युदर पनि बढ्यो। भदौ ४ सम्म १ सय २६ संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ। संक्रमित संख्या २९ हजार ६ सय ४५ पुगेको छ।
साउनमा लकडाउन अन्त्य गर्दा जोखिमको आँकलन नगरी एकपछि अर्काे गर्दै धेरैजसो क्षेत्र खुला मात्र गरिएन, आमनागरिक पनि ‘संकट टरे झैं’ स्वास्थ्य मापदण्डको न्यूनतम पालना गर्नसमेत छाड्न थाले। सामाजिक लकडाउन हुन नसकेपछि मुलुक फेरि आर्थिक लकडाउनतिर धकेलिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बुधबार मध्यरातिदेखि एक साताका लागि ठप्प गरिएको छ, त्यसपछि पनि लम्बिने सम्भावना धेरै छ।
उद्योग–व्यवसाय बढी रहेका र काठमाडौंपछि आर्थिक गतिविधि बढी हुने वीरगन्ज, विराटनगरसहित तराईका मुख्य सहर आधा महिनादेखि ठप्प छन्। उद्योग–व्यवसाय चलेका छैनन्।
पोखरा, बुटवल, भरतपुर, बिर्तामोड, हेटौंडा, वीरेन्द्रनगरमा पनि केही दिनदेखि लकडाउन-निषेधाज्ञा कायम गरिएको छ। सुदूरपश्चिमका मुख्य सहर धनगढी र महेन्द्रनगरमा पनि बिहीबार मध्यरातिबाट निषेधाज्ञा लागू भएको छ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जिल्ला वा जिल्लाका कुनै क्षेत्रमा लकडाउन-निषेधाज्ञा कायम गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेपछि मुलुक फेरि चैत ११ कै बाटोतिर गइरहेको देखिन्छ।
‘लकडाउन-निषेधाज्ञाले मान्छेको जमघट नहुने भएकाले कोरोनाको चेन तोड्न त मद्दत गर्छ, तर यो नै अन्तिम अस्त्र होइन। एकपटक लकडाउन भइसकेपछि त्यसको अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ,’ डा. वन्त भन्छन्, ‘विकल्प भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सम्भावित संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र आइसोलेट आदि हुन्।’
अहिले मुख्य सहरको अर्थतन्त्र ठप्पप्रायः हुँदै गइरहेको छ। उद्योग, कलकारखाना चल्न सकेका छैनन्, औंलामा गन्न सकिनेबाहेक।
सार्वजनिक यातायात, होटल, रेस्टुराँ, मनोरञ्जन, पर्यटन क्षेत्र ठप्प हँदा यसको असर लाखौं श्रमिकलाई परेको छ। १ सय २० दिनको लकडाउनले थिल्थिलो बनेका क्षेत्र खुल्न थालेसँगै तंग्रिने आसा गरिएको थियो। तर, फेरि निराशा छाएको छ।
यसले बेरोजगारी दर बढ्ने खतरा त छँदैछ, श्रमिक कामविहीन बन्दा गरिबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम उत्तिकै बढेको छ।
पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी साउन-भदौमा आर्थिक गतिविधि धिमा नै रहने भए पनि असंगठित क्षेत्रका मजदुर र बेतनभोगीहरू अझ मारमा पर्ने देख्छन्।
‘यसअघिको लकडाउनमा पनि गरिखाने वर्ग निकै समस्यामा परे, रोजगारी गुमाए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिखेर स्थानीय सरकारमार्फत केही राहत त बाँडेका थिए, अब त उनीहरूले पनि हात उठाइसकेका छन्।’
सन् २०२० मा युवा जनशक्ति अझ बढी बेरोजगार बन्ने एक अध्ययनले पनि देखाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा कोभिड-१९ का कारण युवा रोजगारी संकटसँग सामना’ विषयक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा छोटो अवधि ४.८ प्रतिशत र लामो अवधिका रूपमा ६.१ प्रतिशत युवा बेरोजगार हुने आँकलन गरिएको छ।
सन् २०१९ मा २.३ प्रतिशत युवाले रोजगारी गुमाएका थिए। कोरोनाबाट सिर्जित समस्याका कारण नेपाली युवाले सबैभन्दा बढी खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुराँ, निर्माण र कृषि क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएका हुन्।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार कोरोना संक्रमण विस्तार छोटो अवधिमा रोकथाम हुन सके कम्तिमा १ लाख २५ हजार र अझ संकट गहिरिए १ लाख ८६ हजार युवाले पूर्णकालीन रोजगारी गुमाउने छन्।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार मुलुकमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ। अहिले यो दर बढेर १६ प्रतिशतहाराहारीमा पुगेको आँकलन गरिएको सुवेदी बताउँछन्।
गत वर्ष पारित राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औं योजनाअनुसार बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि २८.६ र निरपेक्ष गरिबीको संख्या १८.७ प्रतिशत छ।
पूर्वअर्थसचिव सुवेदी यसले गरिबीको रेखाभन्दा थाेरै माथि पुगेकाे जनसंख्या फेरि तल झर्ने जोखिम देख्छन्। ४५ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीकाे रेथाभन्दा थाेरै माथि उक्लिएकाे छ।
यसअघिको लकडाउनमा ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ।
संकट गहिरिँदा झन्डै एक चौथाइ कर्मचारी-कामदारले रोजगारी गुमाएका थिए। यो अवधिमा ९६.७ प्रतिशत उद्योग-व्यवसायको उत्पादन÷कारोबार ७३.८० प्रतिशतले घटेको थियो।
राष्ट्र बैंकको ‘कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार उद्योग-व्यवसाय लकडाउनपछि सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा करिब नौ महिना लाग्ने उल्लेख थियो भने होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन १३ महिना लाग्ने भनिएको थियो।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह कोभिड-१९ र लकडाउन/निषेधाज्ञाका कारण साना तथा लघु उद्योग उठ्नै नसक्ने गरी धराशयी बनेको बताउँछन्।
‘श्रमिक जो जहाँ थिए त्यहीँ छन्। परिवारका सदस्यले चलाएका उद्योग पनि चल्न नसक्दा रोजीरोटी गुमेको छ,’ उनले भने, ‘जसोतसो कर तिरियो। अब बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने?’
१५ करोड स्थिर पुँजी भएका ३ लाख ७८ हजार घरेलु तथा साना उद्योग रहेको महासंघको तथ्यांक छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. शिवराज अधिकारी हालको निषेधाज्ञा÷लकडाउनले पुर्‌याउने क्षति यसअघिको लकडाउनभन्दा कम नै रहने बताउँछन्।
‘यो समयमा अर्थतन्त्र खासै चलायमान हुँदैन, राजस्व संकलनदेखि पूर्वाधार निर्माणका काम पनि खासै हुँदैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसअघिको लकडाउनका कारण थिचिएको अर्थतन्त्र फेरि समस्यामा पर्ने देखियो नै।’
चालू आर्थिक वर्ष सरकारले लिएको लक्ष्य सकारात्मक बाटोमा जाने, परियोजना कार्यान्वयनमा जाने श्रमिकले काम पाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा लिए पनि अब पर धकेलिने सम्भावना बढ्दै गएको छ।
जति संकट गहिरियो त्यति नै अर्थतन्त्र संकुचन हुन्छ
-शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
गत चैतमा लकडाउन गर्दा आर्थिक गतिविधि पूरै अन्त्य गर्नु हुँदैनथ्यो। राजस्व संकलनदेखि विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा हुने बखत देश नै ठप्प पारियो। जनस्वास्थ्यका हिसाबले त्यतिखेर समस्या पनि जटिल बनिसकेको थिएन।
साउनपछि अवस्था सामान्य हुन्छ भन्ने थियो। अब उत्पादन, आपूर्ति, व्यापार–व्यवसाय सहज बन्ने अपेक्षा थियो। सेवा प्रवाहको पनि अपेक्षा थियो।
रोजगारी गुमाएका पनि रोजगारीमा फर्कने आसा पलाएको थियो। सरकारले यो वर्ष ८ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएकाले रोजगारीका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा आउँथे। रोजगारीका अवसर बढ्थ्यो। पूर्वाधार सडक, सिंचाइ, पूर्वाधारले पनि रोजगारीलाई पनि सहयोग गर्थ्याे
तर, अपेक्षाअनुसार भएन। समस्या झन जटिल हुँदै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहितका मुख्य सहर निषेधाज्ञामा गएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा ६० प्रतिशतहाराहारीमा आर्थिक गतिविधि हुन्छ।
उपत्यका बाहिरको ‘इकोनेमी ग्रोथ’ गर्ने पनि काठमाडौंले नै हो। तर, काठमाडौं नै निषेधाज्ञामा गएपछि समस्या बढ्ने नै भयो।
साउन–भदौमा आर्थिक गतिविधि धिमा नै हुन्थ्यो। यो वर्ष चाँडो खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर झन ढिलो हुने भयो। यो संकट गहिरिँदै गयो भने अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन्छ।
सुरुको लकडाउनमा गरिखाने वर्ग पहिले निकै अप्ठेरोमा परे। पछि केहीमात्रामा भए पनि खानेबस्ने व्यवस्था भयो। अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएपछि आफैं पेट पाल्ने अवस्थामा गइरहेका थिए।
फेरि लकडाउन भएपछि बेरोजगारको संख्या बढ्न सक्ने अवस्था देखिएको छ। अब पूरै अर्थतन्त्र ठप्प पार्नुभन्दा मापदण्ड मिलाएर उद्योग र पूर्वाधारका ठूला आयोजना स्वयंलाई क्वारेन्टाइन बनाई श्रमिकलाई भित्र नै राखेर चलाउन सकियो भने केही सहज हुनसक्छ।
अहिले जनस्वास्थ्यमा बढिभन्दा बढी खर्चनुपर्ने अवस्था त छँदैछ यो वर्ष खर्च दायित्व पनि बढ्छ।
रोजगारी गुमाएकालाई ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रम चलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसबाट श्रमिकले काम पनि पाउँछन् ज्याला पनि। त्यसका लागि फेरि पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आर्थिक गतिविध ठप्प हुने, राजस्व संकलन नहुने, बेरोजगारी दर बढ्दै जाने हो भने अर्थतन्त्र संकुचित हुन्छ। कोभिड–१९ लाई रोकथाम पनि गर्ने गरी संवेदनशील भएर कदम चाल्नुपर्छ। त्यसका लागि युरोपेली मुलुकलाई पनि हेर्नुपर्छ। पूरै अर्थतन्त्र लकडाउनमा नराखी पनि व्यवस्थित तरिकाले अर्थततन्त्र चलाउन सकिन्छ। त्यसका लागि सामाजिक लकडाउन आवश्यक रहन्छ।
कोरोनाको ‘प्याटर्न’ हेरेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्छ
-प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, त्रिवि
मान्छे, कोरोना र अर्थतन्त्रको व्यवहार हेर्नुपर्छ। कोरोना संक्रमण रोक्दै अर्थतन्त्र र मानवलाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
कोरोना संक्रमणको प्याटर्न १०÷१५ दिनमा परिवर्तन भइरहेको छ। तर, हामी अर्थतन्त्रलाई एउटै प्याटर्नमा डोर्‌याइरहेका छौं।
कोरोना संक्रमणको प्याटर्न दुई सातामा कता गइरहेको छ भनेर यकिन गरी अर्थतन्त्र र मान्छेको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ।
अर्थात्, परिस्थिति आँकलन गरेर निश्चित क्षेत्रमा लकडाउन लगाउने, खोल्नेसहित नयाँनयाँ विकल्पमा जानुपथ्र्याे। भाइरसले प्याटर्न परिवर्तन गरिरह्यो हामीले अर्थतन्त्रलाई तीन महिना लकडाउनमा राख्यौं।
चैत ११ गते एकैपटक लकडाउन गरियो, फेरि एकाएक खोलियो। सुरुमा बाहिरबाट आएकामा मात्र संक्रमण देखिएको थियो। त्यही नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। तर, देश नै बन्द गरियो।
हिजो लकडाउन खोलौं भनेका थियौं बन्द गरियो। जबकि, समस्या थिएन। त्यतिखेर विशेषगरी तेस्रो मुलुकबाट र भारतबाट सम्भावित संक्रमित आइरहेका थिए। ती क्षेत्र व्यवस्थित गर्न सकिएन। पछि भारतको उत्तर र बिहारबाट आवतजावत सहज भयो। त्यसले झन् समस्या निम्त्यायो। र, अन्यत्र आवातजावत पनि सहज बनायौं।
साउनमा आएर समस्या बढिरहेको थियो। लकडाउन खोलियो। खुला छाडियो। १० दिन नखोलिदिएको भए अवस्था यो हालतमा आउँदैनथ्यो होला।
कोरोनाको प्याटर्न नै अध्ययन नगरी सबैै बन्द गर्नु ठिक होइन। हाम्रो अर्थतन्त्र पनि हेर्नुपर्छ।
साउन, भदौतिर अर्थतन्त्रको एक्टिभिटी खासै हुँदैन। पूर्वाधारका काम अगाडि बढेको हुँदैन। खर्च पनि खासै हुँदैन। १२ महिनामध्ये कहिले लकडाउन गर्न ठिक भनियो भने अर्थतन्त्रको हिसाबले अहिले खासै समस्या हुँदैन।
तर, १ सय २० दिन लामो लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र संकुचन भएको छ। यसले समस्या पार्छ। अहिलेको निषेधाज्ञाले समस्यालाई अझ जटिल बनाउन सहयोग गर्छ। तर, आर्थिक हिसाबले हेर्दा यसअघिको जस्तो क्षति हुँदैन।